Izindaba - CIAAR 2020 【Exhibition Live】
NgoNovemba 12, 2020, umbukiso we-18th International International Air Conditioning and Refrigeration Technology Exhibition uvule kahle. Ngokuthuthuka okusheshayo komkhakha wezimoto waseChina, imboni yasefrijini yaseShayina ekhombisa inkambiso yokuthuthuka okusheshayo. Konke ukuxhumana okuvela ekukhiqizeni, ukuthengisa kuya ngemuva kokuthengisa kuya ngokuya kuvuthwa ngokwengeziwe. Izidingo zikazwelonke zekhabhoni ephansi kanye nokuvikelwa kwemvelo kwemikhiqizo yezimboni zihlala zithuthuka, okusheshisa ukuqanjwa kwemikhiqizo yamabhizinisi nokwenziwa ngcono komkhakha.
IShanghai International Automotive Air Conditioning and Refrigeration Technology Exhibition iyibhuloho lezokuxhumana elisebenza kahle embonini, eletha ukuhlanganyela kwezobuchwepheshe kwemikhiqizo yezimoto yezomoya. Kusuka ezicini zemizila yezobuchwepheshe namathuba okufaka isicelo embonini, ichaza kabanzi nangokujulile iphuzu elibheke phambili emkhakheni wemikhiqizo yokupholisa umoya yezimoto. Abantu abakulo mkhakha bathole ukuqhubeka nokufunda nokuxhumana lapha ukuze abantu bandise ibhizinisi labo.
Inkampani yethu ibambe iqhaza embukisweni weShanghai International Automotive Air Conditioning and Refrigeration Technology Exhibition iminyaka eminingi ngemikhiqizo yokuqinisa umoya yezimoto. Endaweni ejwayelekile yalolu bhubhane, amakhasimende amaningi asekhaya nakwamanye amazwe asakhangwa yilombukiso wezinsuku ezintathu. Ekuxhumaneni nabo, kudluliswa isiko lenkampani, isithombe senkampani nemikhiqizo emisha kukhonjisiwe, futhi namakhasimende amenywa ukuthi avakashele ifektri futhi asazi ngokujule ukwenza ngcono ukuthembela kwamakhasimende kulo mkhiqizo nokwakha ukuthembana amakhasimende enkampanini yethu. Ukuze ukhethe imikhiqizo efanelekayo yamakhasimende futhi uqinisekise ikhwalithi yesevisi, sikhiqiza imikhiqizo futhi sisebenzisana namakhasimende esizeni sombukiso, sisebenzisa izinyathelo ezisebenzayo ukuxazulula izinkinga zamakhasimende nokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Indawo yombukiso ibigcwele izixuku futhi ibisigcwele phama. Kwakunenqwaba yamakhasimende ethempelini le-1J02, futhi kwakukhona amakhasimende amaningi abonisana. Ukwamukelwa kwethu okufudumele, incazelo ecophelelayo yemikhiqizo yethu ye-air conditioning compressor, kanye nokufakwa kahle kwedokodo kuzuze amakhasimende amaningi. Ake siye ngqo endaweni yombukiso!
Isikhathi Iposi: Jun-10-2021